02/01/2011 - 03/01/2011 ~ The Light of Truth
Sunday, February 27, 2011 The Light Of Truth No comments
Friday, February 25, 2011 The Light Of Truth No comments
ယနေ့ကမ္ဘာလောကကြီးသည် ရှုပ်ထွေးနေပါသည်။ ဆိုးညစ်နေပါသည်။ မှောင်မိုက်နေပါသည်။ ငြိမ်သက်ခြင်း အစားဒေါသအမျက်နှင့် မုန်းတီးမှု၊ ရန်လိုမှုတို့နှင့် ပြည့်နေပါသည်။ မျှော်လင့်ချက်မဲ့၍ ယုံကြည်ချက်တို့ တိမ်း ယိမ်းကာ အယူလွဲသူတို့နှင့် ပြည့်နှက်နေပါသည်။ ယားသောနားအစုံနှင့် မှားသောတရားအဖုံဖုံတို့ကို နားဆင် ရင်း တောင်ကောင်းနိုးနိုး၊ မြောက်ကောင်းနိုးနိုးနှင့် လေတိုက်သော ဖွဲကဲ့သို့သော ဆောက်တည်ရာမဲ့ ဖြစ်နေကြ သူတွေလည်း ဒုနဲ့ဒေး ရှိပါသည်။ စိတ်ပညာရှင်များ၏ ထင်မြင်ချက်သြ၀ါဒများအောက်တွင် ပျော်မွေ့နေသူများ လည်း အများအပြားပင်၊ ထိုအရာများက ကျွန်ုပ်တို့ ၀ိညာဉ်ရေးအတွက် မှန်ကန်သော အဖြေမပေးနိုင်သည့်တိုင် အဖြေမှန်ရရှိနိုင်ရန် မျှော်လင့်ကြီးစွာနှင့် ရပ်တည်နေကြပါသည်။ အမှန်စင်စစ် အနာဂတ်တွင် မျှော်လင့်ခြင်း တစ်ခုရှိနေဆဲပါ။ အချိန်လည်းရှိပါသေးသည်။ ဆုံးရှုံးခြင်းဆိုသည်မှာ အသက်တာအတွက် နောင်တရရန်နှင့် အသစ်ပြုပြင်ရန် လမ်းစဖြစ်ပါသည်။ သို့သော် ဘုရားသခင်မပါသော နောင်တသည် အချည်းအနှီးပင်ဖြစ်သည်။ ဘုရားသခင် သည် အပြစ်ဒုစရိုက်နှင့် ပြည့်ဝနေသော ကမ္ဘာလောကကြီးကို နိမိတ်များဖြင့် သတိပေးနေပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့ တွေ့မြင်ခံစားနေရသော စစ်မီးတောက်များ၊ သဘာဝဘေးအန္တရယ်များ၊ အယူဝါဒလွဲမှားမှုများသည် ဘုရား သခင် ဖော်ပြနေသော သတိပေးခြင်း အရိပ်လက္ခဏာများပင် ဖြစ်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် အချိန်မီ နောင်တရ ရန် လိုပေသည်။ ယော ၃း ၅-၇ တွင် ဖော်ပြထားသော ဒုတိယမွေးခြင်းသည် ကမ္ဘာလောကကြီးအတွက် နောက်ဆုံးနှင့် အကောင်းဆုံး မျှော်လင့်ခြင်းဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့အတွက် တစ်ခုတည်းသော မျှော်လင့်ြ့ခင်း လည်းဖြစ်လေသည်။ မဿဲး ၁၀း၂၈ တွင်လည်း ဤကဲ့သို့ ဖော်ပြထားပါသည်။ ကိုယ်ရော ၀ိညာဉ်ပါ ငရဲတွင် ဖျက်ဆီးနိုင်သူကို ကြောက်ရန်ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် တရားစီရင်ခြင်းကို ကြောက်လျှင် အပြစ်မှ နောင်တ နှင့် ပြန်လှည့်၍ ဘုရားသခင်ထံတွင် လူသစ်ဖြစ်ရပါမည်။ ဘုရားသခင်၏ သားတော်ကို မယုံကြည်သော သူ တို့၏ အသက်တာသည် အဓိပ္ပာယ်မဲ့၍ မျှော်လင့်ခြင်းလည်း မရေရာပေ။ မိမိသည် မည်သည့်နေရာမှ လာ၍ မည်သည့်နေရာသို့ သွားမည်။ အဘယ်ကြောင့် ဤနေရာတွင် ရှိနေရခြင်းတို့ကို နားလည်ခြင်း မရှိပေ။ အ မှောင်လမ်းထဲတွင် ယိုင်နဲ့စွာ လျှောက်လှမ်းနေကြပါသည်။ သားတော်ကို ယုံကြည်သူတို့မူကား မိမိတို့ မည် သည့် နေရာမှလာသည်ကို နားလည်သလို မိမိတို့ အသက်ရှင်နေရခြင်း၏ ရည်ရွယ်ချက်၊ အနာဂတ်၊ ဘုန်း တန်ခိုး၏ ဦးတည်ချက်တို့ကို နားလည်ကြပါသည်။ လူသားတို့၏ အကြီးမားဆုံး ရန်သူဖြစ်သော သေခြင်းကို အောင်နိုင်ခြင်းကြောင့် ဘုရားသခင်ကို ကျေးဇူးတင်ရပါမည်။ ၂တိ ၁း၁၀၊ ၁ကော ၁၅း၂၆၊ ၁ကော ၁၅း၁၅၊ ဗျာ ၁း၁၈။ မယုံကြည်သူများအတွက် သေခြင်းသည် ၀မ်းနည်းစရာကောင်းသော၊ ကြောက်စရာကောင်း သောအရာဖြစ်သည်။ မယုံကြည်သူများသည် ကြီးမားသော စီရင်ခြင်းဖြစ်သော ပလ္လင်ဖြူတရားစီရင်ခြင်းကို သွားရန် စောင့်မျှော်နေကြသည်။ သူတို့သည် သမ္မာကျမ်းစာကို ဖတ်ရှုခြင်းငှာ နားမလည်ကြ၊ သခင် ခရစ်တော်၏ သင်ကြားခြင်းကိုလည်း မှန်ကန်စွာ ယူဆ နိုင်ခြင်းလည်း မရှိကြပါ။ ငရဲမှလွတ်မြောက်ရန် လမ်း စကိုလည်း မသိရှိကြပါ။ ငရဲရောက်ခြင်းဆိုသည်မှာ ဘုရားသခင်၏ ရှေ့မှောက်တွင် မရှိခြင်းပင်ဖြစ်သည်။ သခင်ခရစ်တော်သည် ငရဲ၏အဓိပ္ပာယ်ကို ဖော်ပြရန် စကားလုံးသုံးလုံး အသုံးပြုထားသည်ကို တွေ့ရပါသည်။ ၄င်းတို့မှာ- (၁) မီး (၂) မှောင်မိုက်ခြင်း (၃) သေခြင်း တို့ဖြစ်ပါသည်။ ဟေဗြဲ ၁၂း၂၉ " ငါတို့ဘုရားသခင် သည်လောင်သောမီးဖြစ်တော်မူ၏ " ဟု ငရဲကို ရည်ညွှန်းဖော်ပြထားပါသည်။ မှောင်မိုက်ခြင်းနှင့်လည်း ပတ် သက်၍လည်း ၁ယော ၁း၁၅၊ မဿဲ ၈း၁၂ တွင် ဖော်ပြထားပါသည်။ သားတော် ယေရှုခရစ်တော်ကို ငြင်း ပယ်သောသူသည် အမှောင်သို့ ထာဝရရောက်ရှိမည်ဟု ဖော်ပြထားခြင်း ဖြစ်သည်။ ထိုမှောင်မိုက် ငရဲမှ လွတ်မြောက်ရန်နှင့် အလင်းရှင် ခရစ်တော်ကို ရရှိရမည်ဖြစ်ပါသည်။ တတိယ ငရဲကို ကိုယ်စားပြုသော စကားလုံးမှာ သေခြင်းဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် သေခြင်းတည်းဟူသော ငရဲမှ လွတ်မြောက်ရန် အသက်ရှင် သော ယေရှုခရစ်ကို ယုံကြည်ရမည်ဖြစ်သည်။ သို့ဖြစ်၍ ငရဲသည် ဘုရားသခင်၏ အသက်နှင့် ကွဲပြားခြားနား သည်ကို တွေ့ရသည်။ ဘုရားသခင်သည် မည်သူ့ကိုမျှ ငရဲသို့ မရောက်စေလိုပါ။ ငရဲဆိုသည်မှာ စာတန်နှင့် သူ၏အပေါင်းအပါ များအတွက်သာ ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့သည် စာတန်မာရ်နတ်၏ လမ်းသို့လိုက် ၍ အယူဝါဒလွဲမှားကာ ဒုစရိုက်နှင့် ပျော်မွေ့မည်ဆိုလျှင် ဆုံးရှုံးခြင်းသို့ ရောက်လိမ့်မည်ဖြစ်သည်။ ဘုရား သခင်သည် လူသားများ ကယ်တင်ခြင်းရရန် အလိုရှိသည်။ ( ၁တိ ၂း၎ ) သို့ဖြစ်၍ ဘုရားသခင်သည် သား တော်ကို လောကလူသားတို့အတွက် အခမဲ့ လက်ဆောင်ပေးခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ ခရစ်တော် အသေခံခြင်းသည် လူသားများ တရားစီရင်ခြင်းမှ လွတ်မြောက်ရန် ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် (ဟေ ၅၃း၆ ) တွင် " ငါတို့ရှိသမျှ သည် သိုးကဲ့သို့ လမ်းလွဲလျက်၊ ကိုယ့်လမ်းသို့ အသီးသီး လိုက်သွားကြသည် ဖြစ်၍၊ ထာဝရဘုရားသခင်သည် ခပ်သိမ်းသော ငါတို့၏ အပြစ်များကို သူ့အပေါ်၌ တင်တော်မူ၏ " ဟု ဖော်ပြထားပါသည်။ စစ်မှန်သော ယုံ ကြည်သူများအတွက်မူ တရားစီရင်ခြင်းသည် ကျော်လွန်သွားပြီး ဖြစ်လေသည်။ ငရဲလည်း မရှိတော့ပေ။ ထာဝရသေခြင်းဟူကား ဝေးစွ၊ ခရစ်တော်သည် ကျွနင်္ုပ်တို့အတွက် အသေခံခြင်းအားဖြင့် ထာဝရသေခြင်းကို ဖျက်ဆီးခဲ့သည်။ ( ဖိလိပ္ပိ ၁း၂၃၊ ၁ယော ၃း၁၄ ) မယုံကြည်သူတစ်ယောက်သည် သေဆုံးသည့်တိုင် မျှော် လင့်ချက်ကင်းမဲ့၍ ယုံကြည်သူ ခရစ်ယာန်တစ်ယောက်သည် အဆုံးမရှိသော မျှော်လင့်ခြင်းရှိသည်။
ဆာ ၁၆း၁၁ တွင် " အသက်ရှင်ခြင်းလမ်းကို ပြညွှန်တော် မူလိမ့်မည်။ အထံတော်၌ စုံလင်သော ၀မ်းမြောက် ခြင်းနှင့် လက်ျာတော်နားမှာအစဉ် ပျော်မွေ့ခြင်းအခွင့်ရှိပါ " ဟုဖော်ပြထားသည်ကို တွေ့ရသည်။ သင်သည် ထာဝရဘုရားအမြင်မှ မိမိသည် အပြစ်သားတစ်ဦးဖြစ်ကြောင်းကို နှိမ့်ချစွာ သိမှတ်ပြီး ခရစ်တော်သည် ကား တိုင်ပေါ်၌ အသေခံပြီး အသွေးတော်အားဖြင့် ရွေးနုတ်ခဲ့ခြင်းကို ယုံကြည်လျှင် ကယ်တင်ခြင်းရ၍ နှလုံးသား
၌ ငြိမ်သက်မှုကို ရရှိမည်။ ကယ်တင်ခြင်းရရန် အံ့သြဖွယ်အမှု ပြုရန်မလိုပါ။ အံ့သြဖွယ် သခင်ယေရှုကို လက်ခံရန်သာလိုသည်။ ယော ၁း၁၂တွင် " ထိုသူကို လက်ခံသမျှသော သူတည်းဟူသော ကိုယ်တော်ကို ယုံ ကြည်သော သူတို့အား ဘုရားသခင်၏ သားဖြစ်ရသောအခွင့်ကို ပေးတော်မူ၏ " ဟုဖော်ပြထားသည်။ ထို့ကြောင့် သခင်ယေရှုခရစ်တော်အား ယုံကြည်လက်ခံ၍ သင်၏အသက်တာကို အပ်နှံပါ၊ သခင်ယေရှုခရစ်တော်အား ၀န်ခံခြင်းမရှိဘဲ အချိန်တွေကို မကုန်လွန်စေပါနှင့်။
credit to >>> ကားတိုင်လမ်း Magazine
Sunday, February 20, 2011 The Light Of Truth No comments
ရန်ကုန်မြို့ အင်းလျားလမ်းရှိ အင်းလျားကန်ဘောင်တွင် သူငယ်ချင်းနှစ်ယောက် ကော်ဖီသောက်နေခိုက်
ရှယ်လီ။ ။ ဟေ့သူငယ်ချင်း လူတွေအပြောအများဆုံး ကျမ်းစာထဲမှာရှိတဲ့ကျမ်းချက်ကဘာလဲနင်သိလား
ဇင်ဇင် ။ ။ သိပ်သိတာပေါ့ဟယ် ……….. “ တောင်းကြလော့၊ တောင်းလျှင်ရမည် “ တဲ့ သေသေချာချာမှတ်ထား။
Friday, February 18, 2011 The Light Of Truth No comments
သင်းအုပ်ဆရာတစ်ဦးသည် ညအမှောင်တွင် လမ်းလျှောက်နေရင်း လူငယ်တစ်ယောက်နှင့်တွေ့ရာ မိတ်ဖွဲ့ရင်းစကား ပြောဖြစ်ကြသည်။
လူငယ်။ ။ ဟိုးတစ်လောက ဗေဒင်မေးတာ အသက် (၂၀) မှာသေမယ်လို့ ပြောတယ်ဗျ။
ဆရာ။ ။ အခုခင်ဗျားအသက်ဘယ်လောက်ရှိပြီလဲ။
လူငယ်။ ။ ၂၁ နှစ်
ဆရာ။ ။ ဒါဆိုဗေဒင်က မှားတာပေါ့။
လူငယ်။ ။ မမှားပါဘူး။ ကျနော်မနှစ်ကမှ သေတာလေ။
ဆရာ။ ။ ဒါဆို ခင်ဗျားအခုဘာလုပ်နေလဲ။
လူငယ်။ ။ ခရစ်ယာန်တွေကို လိုက်နှောင့်ယှက်ဖို့ စာတန်ကခိုင်းထားတယ်ဗျ။
ဆရာ။ ။ ဒါဆိုအလုပ်များမှာပဲနော်။
လူငယ်။ ။ ဘယ်ကလာဗျာ အလုပ်အရမ်းပါးပါတယ်၊ ကျနော်တောင်ဘာမှလုပ်စရာသိပ်မလိုဘူး။ သူ့ဟာသူကိုဖြစ်နေကြတာ၊ နာမည်ခံလိုက်ရုံပါပဲ။
Monday, February 14, 2011 The Light Of Truth 1 comment
စိတ်နှလုံးဖြူစင်သောသူတို့သည် မင်္ဂလာ ရှိကြ၏။ အကြောင်းမူကား ထိုသူတို့သည် ဘုရားသခင်ကို မြင်ရကြလတ္တံ။ ( ရှင်မဿဲ ၅း ၈ )
ဘုရားသခင်ရဲ့ ကောင်းကြီးမင်္ဂလာခံစားရဖို့ အရေးကြီးတဲ့အရာတစ်ခုက ကျနော်တို့ရဲ့ နေ့စဉ်အသက်တာမှာ ဘုရားသခင့်မျက်မှောက်တော်ကို ခံစားရသူများ ဖြစ်ဖို့ပါပဲ။ တစ်နည်းအားဖြင့် ထိုးဖောက်မှုရှိသောအသက်တာ ဖြစ်ဖို့ အရေးကြီးပါတယ်။ ဒီလိုထိုးဖောက်မှုရှိတဲ့ အသက်တာ၊ ဘုရားသခင်ရဲ့ မျက်မှောက်တော်ကို ခံစားရတဲ့ အသက်တာအတွက် အရေးကြီးဆုံးအရာတစ်ခုက ဖြူစင်တဲ့ နှလုံးသား ဖြစ်ပါတယ်။ တစ်နည်းအားဖြင့် ရိုးစင်း တဲ့နှလုံးသားလည်း ဖြစ်တယ်။ စင်ကြယ်တဲ့နှလုံးသားလည်း ဖြစ်တယ်။ ကျနော်တို့ အတွင်းစိတ်နှလုံးက ကြည် လင်ဖို့၊ ဖြူစင်ဖို့၊ သန့်ရှင်းဖို့၊ ရိုးသားဖို့နဲ့ ရှင်းလင်းဖို့ အရေးကြီးပါတယ်။ ဘာလို့လည်းဆိုတော့ ဘုရားသခင်ဟာ သန့်ရှင်းတဲ့ဘုရား ဖြစ်တယ်။ ( ဟာလေလုယာ )……။ ကျနော်တို့ စိတ်နှလုံးတွေ စင်ကြယ်ဖို့ မလွယ်ပါဘူး။ စိတ် နှလုံးကိစ္စဆိုတာ နေ့တိုင်းတိုက်ပွဲ ၀င်နေရတဲ့ အရာဖြစ်ပါတယ်။ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် စင်ကြယ်တယ်လို့ ထင်နေတဲ့ အချိန်ဟာ မာန်မာနတွေကြီးနေတဲ့ အချိန်ဖြစ်တတ်ပြီး၊ စင်ကြယ်တယ်လို့ ထင်လေလေ၊ မာနကြီးလေလေ ဖြစ် တယ်။ ၀ါကြွားမှုတွေ၊ ဟန်ဆောင်မှုတွေက ဘယ်သူ့ကိုမှ လိမ်လည်လှည့်ဖြားနေခြင်း မဟုတ်ဘဲ ကိုယ့်စိတ်နှ လုံးက မိမိကိုယ်ကို လှည့်ဖြားနေခြင်းပဲ ဖြစ်တယ်။ ယေရမိအနာဂတ္တိကျမ်း ၁၇း၉ မှာ “ စိတ်နှလုံးသည် ခပ်သိမ်း သောအရာထက် စဉ်းလဲတတ်၏ ။ အလွန်ယိုယွင်းသောသဘောရှိ၏ ။ စိတ်နှလုံးသဘောကို အဘယ်သူသိနိုင် သနည်း “ သူတစ်ပါးစိတ်ကို မပြောနဲ့၊ ကိုယ့်စိတ်ကိုတောင် သိဖို့မလွယ်ဘူး။ သူတစ်ပါးစိတ်ကို သိတယ်လို့ပြော တဲ့သူတွေဟာ လျှောက်ပြော နေခြင်းပဲဖြစ်တယ်။ ကိုယ့်စိတ်ကို သိဖို့ဟာလုံးဝ မလွယ်တဲ့အရာ ဖြစ်တယ်။ ကိုယ့် စိတ်က မိမိကို လိမ်ညာနေတာ ဖြစ်တယ်။ လူတစ်ချို့က ပြောတတ်တယ် “ ငါသူ့မျက်နှာကို ကြည့်လိုက်တာနဲ့ သူ့စိတ်ကို သိတယ် “ ။ အလကား လျှောက်ပြောနေတာ။ ဆရာကြီး Watchman Nee က “ နှိမ့်ချဖို့ဆိုတာ အ ရမ်းအရေးကြီးတယ်။ ပြဿနာက မိမိကိုယ်မိမိ နှိမ့်ချမှန်း သိနေသရွေ့ မနှိမ့်ချသေးပါ “။ သင်အမှန်တကယ်နှိမ့် ချတဲ့အခါ မိမိကိုယ်မိမိ သိမှာမဟုတ်ဘူး။ ဆာလံ ၁၃၉း ၂၃-၁၄ မှာ “ အို….ဘုရားသခင် အကျွန်ုပ်ကိုစစ်ကြော ၍ အကျွန်ုပ်၏စိတ်နှလုံးကို သိမှတ်တော်မူပါ၊ စုံစမ်း၍ စိတ်အထင်များကိုလည်း သိမှတ်တော်မူပါ။ ဆိုးသောလမ်း သို့ ကျွန်ုပ်လိုက်သည်၊ မလိုက်သည်ကို ကြည့်ရှု၍ ထာဝရလမ်းသို့ သွေးဆောင်တော်မူပါ “။ ဒါ့ကြောင့် ဆာလံ ဆရာကြီးက ဒီသဘောကို သိလို့ ဘုရားသခင်ဆီ အမြဲတမ်း အစစ်ဆေးခံနေခြင်းဖြစ်တယ်။ တစ်ခါတစ်ရံကျနော် တို့က တစ်ယောက်ယောက်ကို စေတနာနဲ့ အကြံပေးသလို ရှိပေမယ့်လည်း အဲဒီစေတနာရဲ့နောက်ကွယ်မှာ ရည်ရွယ်ချက်လေး ရှိတတ်တယ်။ ဒါကြောင့် စကားပြောတဲ့အခါ ဘာ့ကြောင့်ပြောသလဲဆိုတဲ့ ရည်ရွယ်ချက်က အရေးကြီးပါတယ်။ သင်လုပ်နေတဲ့ အလုပ်ရဲ့နောက်ကွယ်မှာရှိတဲ့ ရည်ရွယ်ချက်က အရေးကြီးပါတယ်။ စစ်မှန် သော ဆက်ကပ်ခြင်းဆိုတာ အလုပ်တစ်ခုကို စတင်လုပ်တော့မယ့် အချိန်မှာ ဆုတောင်းနေခြင်းပဲမဟုတ်ပါဘူး မှန်တကယ် ဆက်ကပ်တဲ့အသက်တာဆိုတာ “ ကိုယ်တော် ကျွန်ုပ်ရဲ့အကြံအစည်ကို စစ်ဆေးပါ။ ဆိုးသော လမ်းသို့ လိုက်သည်၊ မလိုက်သည်၊ ကျွန်ုပ်၏ အကြံအစည် မှန်သည် မှားသည်ကို ကိုယ်တော် သိတော်မူသော ကြောင့် ထာဝရလမ်းသို့ သွေးဆောင်တော်မူပါ “ ကျနော်တို့ရဲ့စိတ်နှလုံးအကြံအစည်ဟာ ဖြူစင်သန့်ရှင်းလာတဲ့ အခါ မမြင်နိုင်တဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့ ငြိမ်သက်ခြင်းကသာ၍ နေရာယူလာမှာဖြစ်တယ်။ ကျနော်တို့ ဆုတောင်းခြင်း၊ ချီးမွမ်းကိုးကွယ်ခြင်းလုပ်တဲ့အခါ လူတစ်ယောက် အပေါ်မှာ စိတ်ဆိုးနေရင် ဘုရားမျက်မှောက်တော် ခံစားမယ့် အစား ခံပြင်းတဲ့စိတ်၊ မခွင့်လွှတ်နိုင်တဲ့စိတ်ဝင်လာပြီး မှားယွင်းတဲ့ အတွေးအခေါ်ဖြစ်လာလို့ ဘုရားသခင်ကို နံဝိညာဉ်၊ သစ္စာတရားနဲ့ မကိုးကွယ်နိုင်တော့ဘူး။ ကျနော်တို့ရဲ့ ရန်သူ စာတန်က စိတ်နှလုံးထဲမှာ ၀င်ရောက် တိုက်ခိုက်နေပြီး မုန်းတီးခြင်း၊ ၀မ်းနည်းခြင်း၊ စိတ်အားငယ်ခြင်းတွေ ထည့်ပေးပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဘုရားသခင် ရှေ့မှာ စင်ကြယ်တဲ့ နှလုံးသားရှိဖို့ မလွယ်ကူတော့ဘူး။ အချင်းချင်းတစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက် စကားများကြ တာလည်း ဘာမဟုတ်တဲ့ အကြောင်းကိစ္စလေး ကြောင့်သာ ဖြစ်တတ်တယ်။ တစ်ယောက်ကို တစ်ယောက်မာန် မာနပြိုင်ကြပြီး အလျှော့မပေးချင်တဲ့အတွက်ကြောင့် ရန်ဖြစ်တတ်ကြတယ်။ ဒီလိုအချိန်မျိုးမှာ ဆုတောင်းရင် စိတ်နှလုံးမပါနိုင်တော့ဘူး။ သီချင်းဆိုရင်လည်း အနှောင့်အယှက်တွေ အတွေးထဲ ၀င်လာတာကြောင့် ဘုရား မျက်မှောက်တော် မခံစားနိုင်တော့ဘူး။ တစ်ခါတလေ ဆုတောင်းသလိုလိုနဲ့ စိတ်ကူးယဉ်ပြီး အချိန်ကုန်သွား တတ်တယ်။ ဘုရားကျောင်းထဲမှာလည်း ခပ်တည်တည်နဲ့ တင့်တင့်တယ်တယ် ၀တ်ဆင်ပေမယ့်လည်း စိတ် နှလုံးက ညစ်ညူးနေတတ်တယ်။ ဘုရားသခင်ကို စိတ်နှလုံးအကြွင်းမဲ့ ကိုးကွယ်တဲ့အခါ တစ်စုံတစ်ခု ဖြစ်တော့ မယ်ဆိုတာကို နတ်ဆိုးတွေက သိလို့ နှောင့်ယှက်တာဖြစ်တယ်။ နတ်ဆိုးတွေက “ မင်းကိုငါ တိုက်ခိုက်ပြီ “ လို့ ဘယ်သောအခါမှ ပြောမှာမဟုတ်ပါဘူး။ တိတ်တိတ်လေးအရသာရှိရှိ ကျနော်တို့ စိတ်ကူးထဲ ၀င်လာတတ် တယ်။ ဒါတွေကို တွေးတဲ့အခါ အခြားအရာတွေထက် အရသာပိုရှိတယ်။ ဒါကြောင့် နှစ်သစ်မှာ ယုံကြည်သူတွေ ၀ိညာဉ်ရေးရာမှ ပြန်လည်နိုးကြားပြီး အသစ်တဖန် လန်းဆန်းဖို့ ဘုရားရှင် ကောင်းကြီးပေးပါစေ။ ( ဟာလေလု ယာ ) ကျနော်တို့ အသက်တာမှာ ဘုရားသခင်ကို ချီးမွမ်းကိုးကွယ်တဲ့အခါ အနှောင့်အယှက်တွေ ၀င်လာရင် မျက်မှောက်တော်မခံစားနိုင်တော့ဘူး။ ဒါ့ကြောင့် နှုတ်ကပတ်တော်က ကာလအစဉ်စိတ်နှလုံးပါလျက်ဆုတောင်း ဖို့ တိုက်တွန်းထားတာဖြစ်တယ်။ တစ်ခါတလေမှ မဟုတ်ဘဲ အမြဲတမ်းစိတ်နှလုံးပါရမယ်။ ကိုယ်ဆုတောင်းတာ တခြား၊ စိတ်ကူးယဉ်တာ တခြား၊ ကိုယ်ဆိုနေတာတခြား၊ ကိုယ့်ခံစားချက်ကတခြား ဖြစ်တယ်တယ်။ ကိုယ်ဆို နေတဲ့သီချင်းကို အမှန်တကယ် ခံစားတတ်လာပြီး စိတ်နှလုံးပါလာရင် ကိုယ့်မျက်နှာမှာ ပေါ်လာမယ်။ ၀မ်းမြော က်သည်ဆိုပြီး မျက်နှာမှာ ခပ်မှိုင်မှိုင်ဖြစ်နေရင်တော့ စိတ်နှလုံးမပါလို့ပဲ။ နှစ်သစ်မှာ ညီအကိုမောင်နှမအားလုံး ဘုရားသခင်ရဲ့ မျက်မှောက်တော်ထဲမှာ အရှိန့် ပြေးနိုင်ဖို့ စိတ်နှလုံးဖြူစင်ဖို့ အရေးကြီးပါတယ်….အာမင်။ ကိုယ် တွင်း ၀ိညာဉ်သန့်ရှင်းလာတဲ့အထိ ဆုတောင်းဖို့လိုပါတယ်။ ကျနော်လည်း ဆုတောင်းတဲ့အခါ တစ်ခါတလေ စိတ်ကူးယဉ်မိတတ်ပါတယ်။ ကိုယ့်ကိုကိုယ် ဆုတောင်းတယ်လို့ ထင်ပေမယ့် အချိန်တော်တော်ကြာသွားမှ ငါ စိတ်ကူးယဉ်နေပါလားဆိုပြီး ကိုယ့်ခေါင်းကိုပြန်ခေါက်ပြီး သတိပေးခဲ့ရတယ်။ ကိုယ့်ကိုကိုယ် ပြန်လည်ဆက်ကပ် ရတယ်။ ကျနော်တို့ ပြန်လာကြရအောင်။ ပြန်ဆုတောင်းကြရအောင်။ စိတ်နှလုံးပါလျက် စိတ်နှလုံးသွန်းလောင်း လျက် အမှန်တကယ် ဘုရားသခင်ကို ဖူးမျှော်တတ်လာအောင်၊ ဘုရားမျက်မှောက်တော်ခံစားတတ်လာအောင် ကိုးကွယ်တတ်လာအောင်၊ ဘုရားသခင်ရဲ့ကြီးမြတ်ခြင်းကို ခံစားတတ်လာအောင်၊ ဘုရားရဲ့သန့်ရှင်းခြင်း၊ ဘုရားရဲ့ ချစ်ခြင်းမေတ္တာ အမှန်တကယ် ခံစားတတ်လာအောင် ကိုယ့်ကိုကိုယ် တိုက်ပွဲဝင်ကြရအောင်။ ကိုယ့် စိတ်နှလုံးရဲ့ ကောက်ကျစ်စဉ်းလဲခြင်း၊ လိမ်လည်လှည့်ဖြားခြင်းမှ ထွက်လာပြီး ဘုရားမျက်မှောက်တော်ကို ကိုး ကွယ်တတ်လာတဲ့အထိ ဆုတောင်းဆက်ကပ်ကြရအောင်။
မူရင်း။ ။ Encounter အတွဲ (၄) အမှတ် (၃၆)
မှတ်ချက်။ ။ စာလုံးများအား အနည်းငယ်ပြင်ဆင်ထားပါသည်။
Tuesday, February 08, 2011 The Light Of Truth No comments
မြန်မာစကားပုံတစ်ခုရှိသည်။ ၄င်းမှာ " အကြောင်းကြော
င်းကြောင့် အကျိုးဖြစ်လာသည် " ဟူသော စကားဖြစ် သည်။ ယခု ကျွန်ုပ်တို့ခံစားရရှိသည့် အကျိုးရလဒ်ဖြစ်သ
ည့် ဆိုးခြင်း၊ ကောင်းခြင်းအားလုံးသည် ရှေးဘိုးဘေးများ
၏ အသက်ရှင်မှု အကြောင်းရင်းကြောင့် ဖြစ်၏ ။ နောင်
လာနောက်သားများ ခံစားရမည့် အကျိုးရလဒ်များသည်
လည်း ယခုကျွန်ုပ်တို့အပေါ်၌ မူတည်ပါ၏ ။ ဤလောက
သည် " အဆိုးနှင့်အကောင်း၊ အကျိုးနှင့်အကြောင်း "များ
သည်လည်း အမြဲဒွန်တွဲ လျက်ရှိနေပါ၏။ သင်ကိုယ်တိုင်
ကျိုးကျေးဇူးကို ခံစားလိုပါသနည်း? ယနေ့သင့်အပေါ်မှာ
မူတည်ပါ၏ ။ ထို့ကြောင့် ဘုရားသခင်နှင့်အတူသွားလာ
ခြင်းအားဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့နှင့် အတူနောင်လာနောက်သား
များအတွက်ပါ ကောင်းကျိုးဖြစ်စေဖို့ရန် သမ္မာကျမ်းစာထဲမှ ပုဂ်ဂိုလ် (၃) ဦးအားဖြင့် ဖော်ပြပေးလိုပါ၏ ။
(၁) ဘုရားနှင့်အတူသွားလာသောနောဧ ( က ၆း ၉ )
" .....နောဧသည် ဘုရားသခင်နှင့်အတူ သွားလာ၏ ....... "
နောဧခေတ်ကာလ၌ ဘုရားသခင်ကို ကိုးကွယ်သောသူ ရှိကြပါ၏ ။ သို့သော် ဘုရားသခင်နှင့်အတူသွားလာ
ခြင်းထက်။ မိမိတပ်မက်ခြင်းထဲ၌သာ သွားလာကြ၏ ။ ( က ၆း ၂ ) ဘုရားသခင်ကို ယုံကြည်ကိုးကွယ်သော
သူဖြစ်သော်လည်း ဘုရားသခင်ကို ကျောခိုင်းကာ မိမိတပ်မက်ခြင်း နောက်သို့လိုက်ခြင်းဖြစ်သည်။ ဘုရား
သခင်ကို စွန့်ပယ်လျက် မိမိတပ်မက်ခြင်းနောက်သို့ လိုက်ကာ ယုံကြည်ခြင်းတရားကို စွန့်လွှတ်ခဲ့သည်။ ထို
အရာကို ဖောက်ပြန်ခြင်းဟု ခေါ်သည်။ ဘုရားသခင်အသိုင်းအ၀ိုင်းမှ ဖောက်ထွက်ခြင်းဖြစ်သည်။ သို့သော်
နောဧမူကား လူအများဖောက်ပြန်တိုင်း လိုက်၍ ဖောက်ပြန်သူမဟုတ်ပါ။ ဘုရားသခင်ကို​ ယုံကြည်ခြင်းမှ
မစွန့်ခွာပါ။ ထို့ကြောင့် ဘုရားသခင်က သူ့အား စိတ်တော်နှင့်တွေ့သော သူဟု မှတ်တမ်းတင်ခံရသည်။
( က ၆း ၈ )
သာမန်လူသားဖြစ်သော်လည်း ဘုရားသခင်ကို ယုံကြည်ခြင်းမှ မဖောက်ပြန်ခဲ့ပါ။ ထို့ကြောင့် ဘုရားသခင်
ကသူ့အား စုံလင်သောသူ၊ ဖြောင့်မတ်သောသူဟု သတ်မှတ်သည်။ ယနေ့ခေတ်ကာလသည် နောဧခေတ်
ကာလနှင့် မခြားနားပါ၊ ပို၍ပင်ဆိုးပါသည်။ နောဧခေတ်၌ လူနှင့်သက်ရှိအားလုံး ဖောက်ပြန်ကြသည်။ ယနေ့
ခေတ်ကာလ၌ လူတိရစ္ဆာန်သာမက ရာသီဥတုနှင့် အပင်များပါမကျန် ဖောက်ပြန်ကြသည်။ ထိုဖောက်ပြန်မှု
အားလုံး၌ သင်နှင့်ကျွန်ုပ်မပါဖို့ အရေးကြီးသည်။
(b) ဘုရားစကားပြောသောသူ ( က၆း ၁၃-၁၂ )
အများနှင့်မတူ ဘုရားနှင့်သွားလာသော နောဧဟူမူကား ဘုရားသခင်ထံမှ စကားသံကို ကြား၏။
အခြားသော ပုဂ်ဂိုလ်များက လူနှင့်စကားပြောသောကြောင့် လူသံကိုသာကြား၏ ။ ဘုရားသခင်၏ စီမံကိန်း
ကို နောဧသိရ၏ ။ ဘုရားသခင်၏ ကယ်တင်ခြင်းကိုလည်း ခံရ၏ ။ ဘုရားသခင်နှင့် သွားလာသော နောဧ၏
ကျေးဇူးကြောင့် သူ၏မိသားစုအားလုံး ကယ်တင်ခြင်းကို ခံရ၏ ။ ( က ၁၆း၃၁ ) " သခင်ယေရှုခရစ်ကို ယုံ
ကြည်လော့။ ယုံကြည်လျှင် သင်နှင့်သင်၏ အိမ်သူအိမ်သားတို့သည် ကယ်တင်ခြင်းသို့ ရောက်လိမ့်မည် "။
ယနေ့ သင်သည်လည်း အများနည်းတူ မဟုတ်ဘဲ ဘုရားသခင်နှင့် စကားပြောသောသူ၊ ဘုရားသခင်ကိုယုံ
ကြည်သောသူဖြစ်ပါက ဘုရားသခင်ထံမှ အံ့သြဖွယ် ကောင်းသော အသံတော်၊ ကြီးမားသောကယ်တင်ခြင်း
ကျေးဇူးတော်ကို ခံစားရမည်မှာ သေချာပါသည်။ သင့်ကြောင့် နောင်မျိုးဆက်များတို့သည် ကောင်းကျိုးကို
(၂) ဘုရားသခင်နှင့်သွားလာသော ဒံယေလနှင့်သူငယ်ချင်းများ ( ဒံ ၁း ၈-၁၇ )
ဒံယေလနှင့်သူ၏ သူငယ်ချင်း သုံးယောက်တို့သည် လူပျိုလေးများဖြစ်သည်။ သူတို့သည် စစ်သုံ့ပန်းအဖြစ်
ခေါ်ဆောင်ခြင်းကို ခံရသော်လည်း သူတို့သည် အခွင့်ထူးကို ရရှိခဲ့ကြသည်။ သူတို့ကဲ့သို့ပင် သုံ့ပန်းအဖြစ်
ဖမ်းဆီးခံရသော သူတို့နိုင်ငံသားများလည်း ပါကြပါသည်။ သူတို့ကဲ့သို့ပင် အခွင့်ထူးအတူရကြပါသည်။ သို့
သော် ကွာဟမှုမှာ ဘုရားနှင့်အတူလျှောက်လှမ်းခြင်း၌ မတူညီကြပါ။ ဒံယေလတို့အဖွဲ့သည် ဘုရားသခင်နှင့်
အတူလျှောက်လှမ်းသောကြောင့် ဘုရားသခင်၏ စိတ်သဘောတော်ကို နားလည်ကြ၏ ။ ( ၀တ် ၁၁း ၄၅ -
၁ပေ ၁း ၁၅-၁၆ ) သူတို့သည် ဘုရားသခင်၏ သန့်ရှင်းခြင်းကို သိနားလည်သောကြောင့် သူတို့ကိုယ်တိုင်
လည်း သန့်ရှင်းစွာ အသက်ရှင်ကြသည်။ အခွင့်အရေးကောင်းသည့် စားသောက်ဖွယ်ရာ အကောင်းဆုံး
အစာကို ငြင်းငယ်၍ အညံ့ဆုံးသော အစာကိုရွေးချယ်ကြသည်။ ယနေ့ခေတ် စားသောက်ဖွယ်ရာများသည်
ယခင်ခေတ်ထက်ပို၍ ကောင်းမွန်မှာ သေချာသည်။ ယနေ့လူငယ်ကို မဆိုထားနှင့် လူကြီးများပင်လျှင်အခွင့်
ထူးရှိလာလျှင် လက်လွတ်မခံနိုင်ကြပါ။ လူ့အမြင်၌ အကောင်းဆုံး အစားအသောက်သည် ဘုရားသခင်အ
တွက် ညစ်ညူးသောအရာဖြစ်သည်။ လူ့အတွက် အညံ့ဆုံးသော အစာသည် ဘုရားသခင်ရှေ့၌ အကောင်း
ဆုံးအစာဖြစ်၏ ။ ဒံယေလနှင့် သူငယ်ချင်းတို့သည် ယုံကြည်ခြင်းဖြင့် ဘုရားသခင်နှင့်အတူ လျှောက်လှမ်း
ခြင်းကြောင့် သူတို့၏ လူမျိုးများသည် အခြားသော တိုင်းနိုင်ငံ၌ ထူးခြားစွာ အခွင့်ထူးကို ခံစားရရှိကြပါသည်။
ယနေ့ ကျွန်ုပ်တို့အတွက် သင်ခန်းစာ ဖြစ်သည်။
(၃) ဘုရားသခင်နှင့်အတူသွားလာသောရှင်ပေါလု ( ဂလာ ၂း ၂၀ )
ရှင်ပေါလုသည် ယခင်အသက်တာ ရှောလုဘ၀၌ အသက်ရှင်စဉ်တွင် သူ၏အမြင်လုပ်ရပ်နှင့် သူ့အဖွဲ့အ
စည်း ( ဖာရိရှဲအုပ်စု ) အမြင်နှင့်လုပ်ရပ်သည် မှန်သည်၊ ကောင်းသည်ဟု ထင်ကြသည်။ သူတို့၏ လုပ်ရပ်
သည် ဘုရားသခင် အလိုတော်ဖြစ်သည်ဟု သူတို့ကိုယ်တိုင် ထင်မြင်ကြသည်။ သို့သော် ဘုရားသခင်၏
အမြင်ဘက်၌ သူ၏လုပ်ရပ်သည် ခရစ်တော်ဘုရားသခင်ကို ဆန့်ကျင်တိုက်ခိုက်ကြောင်း သိရသည်။
( တမန် ၉း ၄ ) သို့သော် ရှောလုအသက်တာ ပြောင်းလဲပြီးသည့်နောက် သူသည် ပေါလုအဖြစ် အမည်
ပြောင်းကာ ဘုရားသခင်နှင့်အတူ အသက်ရှင်ခဲ့သည်။ ဘုရားသခင်နှင့် လျှောက်လှမ်းသောအခါ သူ၏အ
တတ်ပညာ အားလုံးတို့သည် ဘုရားသခင့်ရှေ့တော်၌ မစင်ကဲ့သို့ ဖြစ်သည်ဟု သူသိလာခဲ့သည်။ ထိုပညာ
အားလုံးကို သူစွန့်ကာ ခရစ်တော်နှင့်အတူ အသက်ရှင် လျှောက်လှမ်းခဲ့သည်။ ထိုအခါ ဘုရားသခင်သည် သူ့ကိုအခြားသော တမန်တော်တို့ထက် အသုံးပြုကာ ရှင်ဘုရင်များကိုပင် ဧ၀ံဂေလိတရားကို ဟောပြော
ခြင်းအခွင့်ထူးများ သာမက ဘုရားသခင်၏ အထူးဖွင့်ပြချက်များကို ရရှိခံစားခံရသည်။ သြ၀ါဒစာများစွာကို
ရေးသား၍ အသင်းတော်များစွာကိုလည်း တည်ဆောက်ခဲ့သည်။
၂၀၁၁ ခုနှစ်အတွက် သင့်အသက်တာကို မည်ကဲ့သို့ ပြင်ဆင်ထားပါသနည်း ? ယခုအတိုင်းဆက်လက်
အသက်ရှင်မလား ? သို့မဟုတ် ဘုရားသခင်နှင့်အတူ လျှောက်လှမ်းခြင်း အားဖြင့် နောက်မျိုးဆက်သစ်များ
အတွက် ကောင်းကျိုးပြုသောသူ အဖြစ်အသက်ရှင်မလား ? ဆိုတာကို ရွေးချယ်ဖို့ရန် သင့်အပေါ်မှာ မူတည်
- နောဧကဲ့သို့အများနည်းတူမဟုတ်ဘဲ ဘုရားသခင်နှင့်အတူသွားလာသော သူဖြစ်ဖို့ရန်၎င်း
- ဒံယေလကဲ့သို့ အစားအသောက်ကို မမက်မောဘဲ သန့်ရှင်းခြင်းကိုသာနှစ်သက်သကဲ့သို့၎င်း
- ရှင်ပေါလုကဲ့သို့ မိမိ၏ အတတ်ပညာများကို အားမကိုးဘဲ ခရစ်တော်ကိုသာ ကိုးစားလျက် အသက်
ရှင်သကဲ့သို့၎င်း ( ဖိ ၃း ၁၁ )